စိတ်ကြိုက် Plain Drawstring ကျောပိုးအိတ် 420D 210D Polyester Drawstring အားကစားခန်းမလိုဂို
ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏ကျွမ်းကျင်သော Eco Bag ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုထုံးစံအရပထမဆုံးထုတ်ကုန်များရောင်းချခြင်းမှလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကျော်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ယက်ခြင်းမရှိသောအိတ်၊ ဝါဂွမ်းပတ္တူအိတ်၊ အအေးခံအိတ်၊ ဂ၊
Custom Zipper ခေါက်သိမ်းနိုင်သော Non- ရက်ကန်းနိုင်သောခေါက်သိမ်းနိုင်သောအဝတ်အစားအဝတ်အဖုံးအိတ်အနက်ရောင် Polypropylene Non ယက်အထည်အိတ်လက္ကား
ပရီမီယံပစ္စည်း - အ ၀ တ်အထည်များကိုပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်မှုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကြာရှည်ခံရန်တည်ဆောက်ထားပြီး၎င်းသည်သင်၏အဝတ်အစားများအားအမြဲတမ်းကာကွယ်ရန်ကတိပေးထားသည်။
ဖုန်မှုန့်များကိုကာကွယ်ပါ - ဤအဝတ်အိတ်များသည်အသက်ရှူနိုင်သော်လည်းသားရေအင်္ကျီများနှင့်သားရေအကျီများကဲ့သို့အ ၀ တ်အစားများကိုကာကွယ်ပြီးထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဖုန်၊ အိမ်မွေးဆံပင်၊ အလင်းထိတွေ့မှု၊ စိုထိုင်းဆ၊
Zipper စိတ်ကြိုက် 6inch 8inch ရက်သတ္တပတ်မဟုတ်သောလတ်ဆတ်သောသိမ်းဆည်းထားနိုင်သောအိတ်လိမ္မော်ရောင်မဟုတ်သောအပူထိန်းသိမ်းရေးအိတ်ဆောင်အိတ်ဆောင် Picnic နေ့လည်စာလတ်ဆတ်သောအိတ်များ
၂။ ကျွန်ုပ်တို့ကသင့်အား Know-How ပေးမည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်လူတိုင်းတွင်တစ်ခုရှိလိုသည်။
- ပစ္စည်းနှင့်အရောင်ရွေးချယ်ပါ။ - ဒီဇိုင်း / အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်၏ LOGO / အကြိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံကိုရွေးချယ်ပါ။
၃။ ပစ္စည်း - Polyplipylene မဟုတ်သော၊ PP ရက်ထည်၊ Polyester၊
4. အမျိုးအစား: နှစ်ဆကိုင်တွယ်;
၅။ ပိတ်သိမ်းခြင်းအမျိုးအစား - ထိပ်ဆုံးဖွင့်ပွဲ၊
6. ဝန် - ဆောင်သော: 5-10 ကီလိုဂရမ်;
Zipper ပန်းရောင်အပြာရောင် Nonwoven အပူအိတ်သည်အစားအစာအတွက်ပင်လယ်စာကိတ်အိတ်ကိုထုတ်ယူခြင်းမဟုတ်ပါ
၁။ ပစ္စည်း - ရက်မသား၊ ပုလဲသိုးမွှေး၊
2. အရွယ်အစား: စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား;
၃။ အရောင် - အဖြူ၊ အနက်ရောင် (သို့) သင်တောင်းဆိုချက်အတိုင်းစိတ်ကြိုက်၊
4. လိုဂို: စိတ်ကြိုက်လိုဂို
၅။ ပုံနှိပ်ခြင်း - ပိုးပုံနှိပ်ခြင်း၊ သတ္တုပါးဖြင့်ပြုလုပ်သောကြေးတံဆိပ်နှင့်အပူလွှဲပြောင်းခြင်းပုံနှိပ်ခြင်း၊ အပူပေးသောပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ခြင်း၊
Bolsa de Alimentos Zipper အဖြူရောင်နေ့လည်စာ Cooler Bag အိတ်ဆောင်ခဲတံအိတ်ဆောင်အိတ်ဆောင်အစားအစာပို့အိတ်အစားအစာအပူအိတ်
အရည်အသွေးမြင့် 1st လာ; ထောက်ခံမှုအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်၏ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းသည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစားစီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းကိုတရုတ်နိုင်ငံအတွက်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းသစ်အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့်အဖွဲ့မှပုံမှန်စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးလိုက်ဖက်သည့်အအေးခံအအေးခံအိတ်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်သီးခြားခွဲ ထား၍ သုံးစွဲသူများကို ရွေးချယ်၍ ယုံကြည်စိတ်ချစေသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးရှိရှိအပေးအယူပြုလုပ်ရန်အလိုရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားဖုန်းခေါ်။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များ Hot Sublimation Blank Non-Woven Shopping Bag
ပရိုမိုးရှင်းအနက်ရောင်အပျိုစင်ဆံပင်ဆွဲကြိုးပိုးထီးထုပ်ပိုးအိတ် Satin Bag
အရောင် - သဘာဝ၊ ဆင်စွယ်ရောင်၊ အဖြူ၊ အဖြူ၊ အနက်၊ အပြာ၊ အနီ၊ အဝါရောင်၊
အရွယ်အစား: ၅ × ၇ စင်တီမီတာ ၇ × ၉ စင်တီမီတာ ၉ × ၁၂ စင်တီမီတာ ၁၀ × ၁၅ စင်တီမီတာ ၁၃ × ၁၈ စင်တီမီတာ ၁၅ × ၂၀ စင်တီမီတာ ၂၀ × ၂၀ စင်တီမီတာ ၂၀ × ၂၅ စင်တီမီတာ ၂၅ × ၃၀ စင်တီမီတာ ၃၀ × ၄၀ စင်တီမီတာ ၄၀ × ၅၀ စင်တီမီတာ၊ ၅၀ × ၇၀ စင်တီမီတာ ၆၀ × ၆၀ စင်တီမီတာစသည်တို့ (မည်သည့်အရွယ်အစားကိုမဆိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်)
လိုဂိုအမှတ်တံဆိပ် - ပိုးစိစစ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပူပြင်းခြင်း၊ ထိုးခြင်း၊ ရက်လုပ်သောတံဆိပ်၊ စက္ကူတံဆိပ်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုခြင်း - လက်ဝတ်ရတနာများ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ ပုလင်းများ၊ စာအုပ်များ၊ ခရစ်စမတ်အလှဆင်ခြင်းစသည်တို့အတွက်အသုံးပြုခြင်း။
အလွသောပစ္စည်း - အရည်အသွေးမြင့်ပတ္တူ၊ ပေါ့ပါး၊ နူးညံ့။ ကြာရှည်ခံနိုင်ခြင်း၊ မျက်ရည်မရနိူင်ခြင်း။
အရေအတွက်နှင့်အရွယ်အစား - စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသောအထုပ်၊ သင့်အကြိုက်ဆုံးမိတ်ကပ်ပစ္စည်းများသည်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ၌သို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေခရီးစဉ်အတွက် duffle အိတ်ထဲတွင်သိုလှောင်ရန်သင့်တော်သောအရွယ်အစားဖြစ်သည်။
အရွယ်အစား 1) စတော့ရှယ်ယာအရွယ်အစား
အရောင်များ 1) စတော့အိတ်အရောင်များ
Nordic Style Eco ဖော်ရွေသောကြိုးချည်ကွက်ပြန်လည်အသုံးပြုစျေးဝယ်အိတ်များ Canvas Shopping Bag
ထုတ်ကုန်အမည် Nordic Style Eco ဖော်ရွေသောကြိုးချည်ကွက်ပြန်လည်အသုံးပြုစျေးဝယ်အိတ်များ Canvas Shopping Bag
အရောင် မည်သည့် Pantone အရောင်၊ HTML Hex အရောင်ကုဒ်များ
အထုပ်ထဲတွင်ပါ ၀ င်သည် -2ပြန်သုံးနိုင်သောဝါဂွမ်းကွက် elastic စျေးဝယ်အိတ်အိတ်
အရွယ်အစား: 41x41cm, စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသောပစ္စည်းများ - ၁၀၀ မှထုတ်လုပ်သည်％ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင်အနံ့မရှိသည့်သဘာဝချည်၊ ဤအိတ်ကို အသုံးပြု၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနည်းသည် ပလပ်စတစ်, ရေအေးနှင့်အတူအဝတ်လျှော်စက်
Capacious and Sturdy: အရမ်းလွယ်တယ်။ ဒီအိတ်တွေကသင့်အိတ်ကပ်အရွယ်လောက်လောက်လောက်ပဲလုံပေမဲ့သူတို့ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး - ကုမ္ပဏီလက်ဆောင်များ၊ ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လက်ဆောင်၊ မင်္ဂလာဆောင်လက်ဆောင်၊ ကြော်ငြာပစ္စည်းများ၊ မွေးနေ့များ၊
သင်၏အထင်ရှားဆုံးနှင့်စတင်ပါလေ။ သင်၏ပစ္စည်းများကိုအမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါသို့မဟုတ်ထိုပစ္စည်းပေါ်တွင်သင်ပုံနှိပ်ရန်သင်ရွေးချယ်သောအခြားအရာများကိုပြုလုပ်ပါ။ သင်လိုဂိုတစ်ခုထည့်လိုပါကစိတ်ကြိုက်အကွက်ထဲ၌“ LOGO” ကိုရိုက်ပါ။ သင်၏အနုပညာလက်ရာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါမည်။